Maitiro Ekubatsira Mumwe Munhu Ari Kuvhunduka Kurwisa - Blog
Maitiro Ekubatsira Mumwe Munhu Ari Kuita Kuvhunduka Kurwisa
Kutya kwekuvhunduka kwakaomarara kufungidzira uye kubata nekuti zvinowanzo kungobuda pasina kwazvino pasina chikonzero zvachose.
Ivo vanowanzo kukasira, vachikonzera kwakasimba, kutya kukuru pasina chikonzero chinobatika.
Chiitiko chakafanana chingave chiitiko chinomutsa Hondo kana Mhinduro yemumhepo.
Munhu wacho haasi kuziva uye nemaune kufunga nezve zviito zvavo. Pfungwa dzavo dziri kungo pindura kune chero chinhu chinokurudzira - kunzwa kwakanyanya kwekuti chimwe chinhu hachina kunaka uye chinoda kugadziriswa IZVOZVI.
Mumwe haafanire kuvhiringidza kutya kurwisa ne kushungurudzika kurwisa . Kunyangwe ichiwanzoshandiswa achichinjaniswa neavo vasina kutambura futi, aya mamiriro maviri akasiyana ane mhedzisiro.
zvinotora chii kuti udanane
Munhu anogona kuona zvese kurwisa kwekutya uye kutya kwekutya panguva imwe chete.
Dzimwe nguva, vanogona kusangana nekushushikana uko kunokonzeresa kutya kwekutyisidzira kubva kune yakashata inosimudzira.
Pane zvikamu zviviri zvekuvhunduka kurwisa - zvisingatarisirwe uye zvinotarisirwa.
Kuvhunduka kusingatarisirwi kwekutya hakuna chikonzero chinobatika icho chiri nyore kuziva. Inogona kubuda mushe pasina chinokonzeresa kana chinonzwisisika chikonzero.
Anotarisirwa kutya kwekutya ari kukonzerwa nemamiriro ekunze anomutsa mhinduro inotyisa.
Phobia muenzaniso wakanaka wekutarisirwa kwekuvhunduka kunotarisirwa. Munhu anozvibata anokwanisa kutya kana akazviwana vari munzvimbo yakavharika. Izvo zvaizotarisirwa.
Wese munhu anokwanisa kuve nekutya kurwisa kana ivo vakawandisa zvakanyanya neimwe nzira.
Nekudaro, munhu anosangana nekuwandisa kana kugara achivhunduka kutyisidzira anogona kunge aine chirwere chekutya.
Kuvhunduka uye kushungurudzika kurwisa kwakasiyana munzira dzakawanda dzakakosha. Yekutanga ndeyekuti kutya kwekutya kune dudziro chaiyo nepo kurwisa kwekuzvidya mwoyo kusingaiti.
Chii chinonzi Kutya Kurwisa?
Iyo DSM-5 (chishandiso chinobatsira vashandi vezvehutano kuti vaongorore kusagadzikana kwehutano hwepfungwa) zvinoreva kutya kwekutya semunhu ari panguva yekutya kwakanyanya kana kusagadzikana uye anoratidza mana kana anopfuura ezviratidzo zvinotevera kusvika pakakwirira mukati memaminitsi gumi.
Palpitations, kurovera moyo, kana kukurumidza kurova kwemoyo.
Kubvunda kana kubvunda.
Kunzwa kwekufema kwekufema kana kupwanya.
Kurwadziwa pachifuva kana kusagadzikana.
Nausea kana kushungurudzika kwepamuviri.
Kunzwa dzungu, kusagadzikana, musoro wakareruka, kana kupera simba.
Derealization (manzwiro eisiri echokwadi) kana depersonalization (kuve wakazviparadzanisa wega)
Kutya kurasikirwa nesimba kana 'kupenga.'
Paresthesias. (kushaya simba kana kurira kwekunzwa)
Kutonhora kana kupisa kupisa.
Kune akasiyana hunhu anoona kana munhu angave ane panic kusagadzikana.
Izvo zvinosanganisira agoraphobia, kushandisa zvinodhaka uye kukurudzira, mararamiro ehupenyu, kana kugara uchidzoka nekuvhunduka.
Chii Chinonzi Kushushikana?
Kuzvidya mwoyo uye kusagadzikana kusagadzikana zvine tsanangudzo dzakasiyana.
Kuzvidya mwoyo pachako chinhu chinowanzoitika pamunhu.
Munhu anogona kusangana nekushushikana kana ari panguva yekusanzwa, isingafadzi, kana kushushikana.
Kunzwa kwekutya uye kutya ndiyo nzira yemuviri yekuudza pfungwa inoziva kuti chimwe chinhu chinoda kuitwa nezve mamiriro azvino kuitira kuti kushushikana kupere.
Kubvunzurudzwa kwebasa, kutanga zuva, kana kupinda mune isingazivikanwe zvinogona kukonzera manzwiro ekuzvidya mwoyo.
Chirwere chekushushikana chinhu chinodzokororwa, chinoramba chiripo chekushushikana kwakanyanya uko kunotora mwedzi ingangosvika mitanhatu uye kunokanganisa hupenyu hwemunhu uye kugona kwavo kuita hupenyu hwavo zvinobudirira.
Munhu wacho aizoonawo kana matatu ezviratidzo zvinotevera.
Zvakaoma kuisa pfungwa.
Kushatirwa kana hasha dzinoputika.
Hunhu hunoshanduka, sekushomeka kwenzanga.
Munhu ari kusangana nekushushikana kwekushushikana anowanzo kuve nekunonoka kuvaka.
Vanogona kutanga kutya uye kunetseka nezve chimwe chinhu uye kuti chingakanganisika sei.
Kushushikana ikoko kunogona kuzotevera kuratidza pamwe chete nezviratidzo zvemuviri, sekusvotwa, kurwadziwa pachipfuva, kana moyo wekumhanya.
Maitiro Ekumisa Enyoro Kufungidzira Kufunganya Isati Yakukunda Iwe
Zvaunofanira Kuita Kana Murume Waunoda Aine Hwakaderera-Kuzvikoshesa
Iwe Unobatsira Sei Mumwe Munhu Kupfuura Nekuvhunduka Kurwisa?
1. Ramba wakadzikama.
Kudzikama kwaunogona kugara, zvichave zviri nyore kune munhu ari kusangana nekuvhunduka.
Kuvhunduka uye kushungurudzika mune vamwe vanhu zvinogona kuita kuti kurwiswa kwacho kuwedzere.
Ita zvese zvinodiwa kuti uchengetedze kudzikama kwako uye utaure zvakadzikama pasina zvakashata kana manzwiro anofara.
Izwi rakapfava, rekukurukurirana rinobatsira kudzivirira mamiriro acho kubva pakuenderera mberi achienderera mberi.
2. Fonera amburenzi kana zvakakodzera ).
Kutya kwekutya kunogovana zvakawanda zvakafanana nekurwadziwa kwemoyo muzviratidzo zviripo.
Kana iwe uri padhuze nemunhu waunofungidzira kuti ane chirwere chekuvhunduka, chinhu chekutanga chekuita kuvabvunza kana vari kuita kutya kwekutya kana vane chero nhoroondo yekuvhunduka kurwisa.
Kana mhinduro iri kwete, havana chokwadi kana kuita vakavhiringidzika, kana munhu akarasikirwa nekuziva, zivisa zviremera nekukurumidza kuburikidza netambo yechimbichimbi.
Marwadzo echifuva anofanira kugara achiongororwa nachiremba.
3. Ibva kure nekutya kukurudzira.
Kana kutya kwekutyisa kwave kukonzerwa nechimwe chinhu chinosimudzira (i.e. zvinotarisirwa) uye uchikwanisa kutsauka kubva pane izvo zvinokurudzira, ita zvishoma nezvishoma uye wakadzikama.
Kana munhu achivhunduka kana ari munzvimbo yakazara vanhu, semuenzaniso, edza kusiya boka iro uye uwane imwe yakavhurika uye yakanyarara nzvimbo yekugara.
4. Bvunza munhu kuti chii chichavabatsira.
Usafunge kuti chero zano raungave wakaverenga kana kunzwa kubva kune vamwe vanhu rinoshanda kune uyu munhu.
Wese munhu akasiyana uye anozoona zvinhu nenzira dzakasiyana. Izvo zvinobatsira kune mumwe munhu zvinogona kukuvadza mumwe.
Teerera, bvunza zvaunogona kuita kuti ubatsire, uye wozopa rubatsiro irworwo.
5. Govera kuvimbiswa uye kuvepo kwakadzikama.
Yeuchidza munhu kuti ingori kutya kwekutya uye ivo havasi mune chero njodzi.
Kunyangwe vangave vachitya nekuremerwa panguva iyoyo, iko kunzwa uye zviratidzo zvichapfuura.
Taura nemitsara mipfupi uye nekusimba. Iva nemoyo murefu navo uye gara navo kuburikidza nekurwiswa.
Kutya kwekutya kunowanzo gara kwemaminetsi makumi maviri kana makumi matatu.
6. Kurudzira munhu kuti atsvage rubatsiro rwakakodzera nerutsigiro.
Iko kune chete kwakanyanya rubatsiro munhu asina ruzivo rwehunyanzvi anogona kupa.
Saka zviri nani kukurudzira munhu kuti atsvage rubatsiro rwehunyanzvi mushure mekusangana nekuvhunduka kurwisa kuti vakwanise kuwana mhinduro yekudzidzora mune ramangwana.
Uyezve taura kuti vatarise mumapoka ekutsigira, munharaunda, mhuri, kana shamwari dzinogona kukwanisa kupa rutsigiro rwakakosha.
Boka rekutsigira vanhu vane chirwere chepfungwa chakagovaniswa rinogona kuve sosi yakanaka kwazvo yerutsigiro neruzivo.
Kutya kutya chinhu chinonyatsoda kumirirwa kunze kusvikira zviratidzo zvapfuura.
Izvi zvinoreva kushivirira, kudzikama, uye kuvapo ndizvo zvinhu zvakakosha mukubatsira mumwe munhu kuburikidza nekuvhunduka kurwisa.
Iwe haudi kuve nemhinduro kumibvunzo yakaoma kana kugadzirira kufambisa nyika. Kuvapo kuri nyore, kudzikamisa kunogona kuita zvishamiso mukusaita kuti mamiriro acho anyanye.
Iri zano rinogona zvakare kushandiswa kubatsira mumwe munhu kuburikidza nekurwisa kwekushushikana, asi kupindira kwehunyanzvi kuri kushoma kudikanwa.
Kurwisa kwekushushikana kwakanyanya chiitiko chakasimba, asi kazhinji hachive chakakura sekuvhunduka.
Ita zvisirizvo padivi pekuchenjerera uye nekuzivisa zviremera kana munhu wacho achifunga kuti zvakafanira, akarasikirwa nehana, kana ane kurwadziwa pachipfuva.
Ita Dzidzira Kuzvichengeta-Uye Kuchengetedza
Kuva anoshivirira uye anonzwira tsitsi kuburikidza nekuvhunduka kurwisa uye kwakanyanya kwehutano hwepfungwa matambudziko anogona kunetsa uye kuoma, kunyanya kana ari mudiwa wauri kuyedza kuve uripo.
Kiyi yekuita kuti hukama hwenguva refu hushande iri mukudzidzira kuzvitarisira, kutora mabhureki kuti udzorezve paunenge uchizvida.
Vamwe vanhu vane hanya zvakanyanya nekushushikana uku kupfuura vamwe uye hauzogare uchiwana nenzira kwayo.
Zvakaoma kudzikama, kushivirira, uye kuunganidzwa kana zvinhu zvikaita senge zvave kuenda zvisiri izvo.
Ita zviitire mutsa , sezvo zvakakosha sekungoitira vamwe mutsa.
zvinorevei kuva nechido nechimwe chinhu
handife ndakawana musikana
maitiro ekudhonza hupenyu hwako pamwechete
kuda mukadzi akaputsika
zviratidzo zvemurume asina kuchengetedzeka muhukama